Nin Somali ah oo geeriyooday kadib markay isugu tageen 52 booliis Ingiriisa - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Nin Somali ah oo geeriyooday kadib markay isugu tageen 52 booliis Ingiriisa
Qoyska Maxamed Xasan oo ku nool gobolka Waylis ee Ingiriiska ayaa dalbanaya inay cadaalad helaan kadib markii willkooda uu dhintey. Maxamed Xasan ayaa booliisku qabtey kadib waxa la geeyay saldhiga halkaas oo booliisku qirtey inay isaga dambeeyeen mudada uu joogey 52 booliisa.
Maxamed XAsan ayaa dhintey bishii hore kadib markii la sii daayay. Wuxuu saacada la soo qabtey iyo marka la soo daayay u dhaxaysay 10 saacadood, waxase mudadaa iskaga daba weydaartey 52 booliisa taas oo ah arin fajaca.
Maxamed Xasan oo 24 jir ahaa ayaa lagu soo eedeeyay inuu amniga wax u dhimay, waxase la sii daayay subaxnimadii markii uu habeenimada u hoyday saldhiga, waxase uu dhintey waxyar kadib markii la sii daayay.
Qoyska Maxamed Xasan ayaa sameeyay baadhitaan gaara waxana la sugayaa natiijada halka booliiska Ingiriiska baadha weli diidan yahay inuu tuso muuqaalada iyo baaritaankooda qoyska.
Booliiska Ingiriiska ayaa fuleynimo awgeed ku hoobta dadka aan cadaanta ahayn inta badana jirdila markey qabanayaan. Dhalinyarada Somalida ayaa ah kuwo ku urey jeelasha qaar kuwaas oo qaarkood lagu kufsado sida ay ku warameen dad soo maray.